အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး အက်စ်တိုးနီးယားမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားအက်စ်တိုးနီးယားရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်မှုသည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နှစ်ဆနေထိုင်မှု၊ , အက်စတိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ passp အက်စတိုးနီးယားရှိ ort အစီအစဉ်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာနှစ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
အပိုအထောက်အပံ့နှင့်အတူအက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 100,000
အက်စတိုးနီးယားသည်ဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့၏တောင်ဘက်ကမ်းခြေပေါ်ရှိဘောလ်တစ်နိုင်ငံအတွက်လက်တွေ့လက်စွဲစာအုပ်ဖြစ်ပြီးဘောလ်တစ်ပင်လယ်၏လက်ရုံးဖြစ်သည်။ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံသည်လတ်ဗီးယားနှင့်ရုရှားတို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ပြီးဖင်လန်၊ ဆွီဒင်နှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ယခင်ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဒေသသည် ၄၅၂၂၇ ကီလိုမီတာစတုရန်းကီလိုမီတာရှိပြီးဒိန်းမတ်နိုင်ငံထက်နိမ့်ကျသည်၊
မြို့တော်နှင့်အကြီးမားဆုံးသောမြို့တော်မှာ Tallinn ဖြစ်သည်။ ဒေသသုံးစကားများဖြင့်ပြောဆိုကြသောအက်စ်တိုးနီးယား၊ ရုရှားနှင့်အချို့သောဆွီဒင်နှင့် Finland တို့ဖြစ်ကြသည်။
အက်စတိုးနီးယားသည်ဥရောပ၏အကျော်ကြားဆုံးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်၏ဒိုမိန်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ညှိနှိုင်းပေးသောကြောင့်၎င်းသည်လူ ဦး ရေ ၁.၃ သန်းမျှသာနေထိုင်သည်။
အက်စတိုးနီးယားတွင်သင်သည် timberland (သို့) အိုင်တစ်ခုမှမိနစ် ၃၀ အကွာအဝေးတွင်မည်သည့်အခါမျှမမောင်းနိုင်ပါ။
လူနေမှုရာသီဥတုသည်အလွန်အမင်းစုံလင်၊ လွတ်ကင်း။ လုံခြုံသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အရအက်စတိုးနီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအထွေထွေလေထုအရည်အသွေးရှိသည်။
ဒီအရွယ်အစားရှိလင့်ကစားဒီနိုင်ငံကကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည့်ပြသမှုများ၊ ပြဇာတ်ရုံများ၊ ပြပွဲများ၊ ပွဲနေ့များ၊ စျေးကွက်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်သာမန်ကိစ္စအများစုကိုဂရုတစိုက်ပြီးစီးသည်။ ကွန်ယက်အခြေပြုဘဏ်လုပ်ငန်းမှသည် e-school နှင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ကုစားထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အများပြည်သူဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများသည်ကျွမ်းကျင်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်။
အညစ်အကြေးကင်းစင်သည့်ရာသီဥတုသည်အထူးဆုတစ်ခုနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုတာကသင်ဘာစားတယ်ဆိုတာကိုသင်ယေဘုယျအားဖြင့်နားလည်ပြီးသင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်။
ဒီမှာငှားဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ဖို့ဘဏ်ကိုချိုးစရာမလိုဘူး။ လက်ရှိနှင့်ပိုမိုအမှတ်ရစရာအဆင်ပြေမှုနှစ်ခုလုံးသည်အလယ်အလတ်ရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာအပန်းဖြေစခန်းသို့မဟုတ်အနီးရှိသစ်တောတစ်ခုနှင့်ပတ်သတ်သည့်နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အလွန်ရိုးရှင်းကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Estonians ရိုးသားစွာကြိုးစားနှင့်ပါတီပွဲကို။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြိုးစားအားထုတ်သောသဘောထားသည်ဤလောက၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလူတိုင်းသည်မည်သို့ဖြန့်ကျက်ရမည်ကိုသဘောပေါက်လာသည်။ သက်သေအထောက်အထားအနေဖြင့်နိုင်ငံ၏နေရာတိုင်း၌ရာသီဥတုအရအပန်းဖြေမှုအသစ်များ၊ အက်စ်တိုးနီးယားသည်အမှန်တကယ်ပင်အဆင့်မြင့်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အနှစ် ၂၀ အတွင်း၌ပင်အက်စတိုးနီးယားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စက်မှုတိုးတက်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်နှုန်းထားများယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးလက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာအရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသောဝေးလံသောအင်တာနက်လည်းဖြစ်သည်။ အက်စတိုးနီးယားသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသမိုင်းကြောင်းရှိပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးလှသည့်လွတ်လပ်သောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်၏အများစုအတွက်ဆိုဗီယက်ယူနီယံအတွက်အရေးပါခဲ့သည်။ သို့သော်အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံသည်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာအထိအချို့သောအတိုင်းအတာအထိသက်ရောက်နိုင်သော်လည်းထူးခြားသောလက္ခဏာနှင့်ဘာသာစကားရှိသည်။ ထို့အပြင်အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အမှန်တကယ်အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နှစ် ၁၀၀၀ မျှသာသက်တမ်းရှိသည့်အဆောက်အအုံများရှိသည်။ OECD မှတ်တမ်းအရပုံမှန်အက်စ်တိုးနီးယားမိသားစုတစ်စုလျှင်တစ် ဦး ချင်းအသားတင်ပြောင်းငွေ $ 20 ရှိသည်။
အက်စတိုးနီးယားရှိနေ့စဉ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်မှာနေထိုင်သူများမြင့်မားသောအဆင့်သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်း၏အောက်တွင်နေထိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အကဲဖြတ်လေ့လာမှုအရလူ ဦး ရေ၏ ၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ဤရိုသေလေးစားမှုအားဖြင့်အက်စတိုးနီးယားသည်ငွေကြေးနှင့်မညီညွတ်သောခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟုယူမှတ်သောအီကွေဒေါနှင့်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံများနှင့်တူသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ အက်စ်တိုးနီးယား
ဗီဇာ / D ဗီဇာ / စီးပွားရေးအတွက်ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်
အက်စ်တိုးနီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုအက်စတိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအထောက်အပံ့၊ အက်စ်တိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အက်စ်တိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာသို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ, အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
အက်စ်တိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
အက်စ်တိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
အက်စ်တိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့အက်စ်တိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
အက်စ်တိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
အက်စ်တိုးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အက်စ်တိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်အဆက်အစပ်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးအက်စ်တိုးနီးယားရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိကြသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်အက်စ်တိုးနီးယား Residency
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်အက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ အက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုအက်စတိုးနီးယားအတွက် Residence Permit ရယူရန် Estonia ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
အက်စတိုးနီးယားအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency ကိုအက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုဆိုင်ရာအက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency အတွက်လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်သက်ဆိုင်သောအက်စ်တိုးနီးယားအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
အက်စ်တိုးနီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သတင်းကောင်းသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စတိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက အက်စတိုးနီးယားမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကုန်သည်များ (သို့) ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့် အက်စတိုးနီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံမှသို့မဟုတ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် အက်စ်တိုးနီးယားတွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့ အက်စ်တိုးနီးယားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက အက်စတိုးနီးယားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့တွင်လုပ်ကိုင်သောအက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံများအတွက်အက်စတိုးနီးယားအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့ အက်စ်တိုးနီးယားရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက အက်စ်တိုးနီးယား အက်စတိုးနီးယားရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရှေ့ရပျ အက်စတိုးနီးယားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ အက်စတိုးနီးယားရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
သုံးစွဲသူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုအက်စတိုးနီးယားသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသည် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
သုံးစွဲသူများအားပံ့ပိုးမှုပေးသောအက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်နေထိုင်မှုမတိုင်မှီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးအက်စ်တိုးနီးယားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း။
အမှု၌၊ အက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအက်စတိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်အရွယ်များကိုအသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။ အက်စတိုးနီးယားအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ အက်စတိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အက်စတိုးနီးယားတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ အက်စတိုးနီးယားတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency အပြင်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
အက်စတိုးနီးယားအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အက်စတိုးနီးယားနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီဖြင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုကျော်လွန်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏နည်းလမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (အက်စတိုးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
အက်စ်တိုးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် အက်စတိုးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် အက်စတိုးနီးယားရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် အက်စ်တိုးနီးယားသင်အစီအစဉ်ဆွဲလျှင် အက်စတိုးနီးယားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ပါ အက်စတိုးနီးယားအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
အက်စ်တိုးနီးယားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ အက်စ်တိုးနီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
အက်စတိုးနီးယားအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
အက်စ်တိုးနီးယားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် setup ကိုစီးပွားရေး
အက်စ်တိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အက်စ်တိုးနီးယား.
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် Web ဒီဇိုင်း
အက်စ်တိုးနီးယားတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးသည့်အဖြေများပေးသည်။
သင်၏မိသားစု ၀ င်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုရရှိပြီးနောက်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုအားလုံးအတွက်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်အက်စ်တိုးနီးယားသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အက်စတိုးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်လျှင်အက်စ်တိုးနီးယားနယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ အက်စတိုးနီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ဒလင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - အက်စ်တိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှနေထိုင်ခွင့်
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်အက်စတိုးနီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အက်စ်တိုးနီးယားသို့နေထိုင်ခြင်းကိုအက်စတိုးနီးယားသို့နေထိုင်ခြင်းကိုအက်စတိုးနီးယားသို့နေထိုင်ခြင်းကိုအက်စတိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ အက်စတိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကကူညီခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားမှာ။
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်မှု | အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
အက်စတိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအက်စတိုးနီးယားရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအက်စတိုးနီးယားစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအက်စတိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအက်စတိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း အက်စတိုးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်အက်စတိုးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအက်စ်တိုးနီးယားအတွက် အက်စတိုးနီးယားရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | အက်စတိုးနီးယားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အက်စတိုးနီးယားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ | အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
အက်စတိုးနီးယားရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအက်စတိုးနီးယားစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ အက်စတိုးနီးယားသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
အက်စတိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုအက်စတိုးနီးယား၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေများစသည်ဖြင့်အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရယူနိုင်သည်။ အက်စတိုးနီးယားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားပါ။ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများ၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ အက်စ်တိုးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residency တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်နေထိုင်ခွင့်အတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အက်စ်တိုးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားမှအေးဂျင့်များသည်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
Residency သည်အက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Residency သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်။ Residency သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုသာအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ Residency အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှအက်စတိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှအက်စ်တိုးနီးယားသို့နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှအက်စ်တိုးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှအက်စ်တိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း ယူအေအီးမှအက်စတိုးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု အက်စ်တိုးနီးယားအဘို့
အက်စ်တိုးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
အက်စတိုးနီးယား Startup - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စတိုးနီးယား ၁၀၀ - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ပညာရေးနှင့်သုတေသန ၀ န်ကြီးဌာန - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စ်တိုးနီးယားတွင်အလုပ်လုပ်သည် - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စ်တိုးနီးယားဥရောပကောင်စီဥက္ကPres္ဌ - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဘဏ္ofာရေးဝန်ကြီးဌာန - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
စီးပွားရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ကမ္ဘာတဝှမ်းအက်စ်တိုးနီးယား၏ကိုယ်စားပြုမှုများ - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စ်တိုးနီးယားအခွန်နှင့်အကောက်ခွန်ဘုတ်အဖွဲ့ - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စ်တိုးနီးယားအစိုးရ - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စ်တိုးနီးယားဥပဒေ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခြင်း - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စ်တိုးနီးယားပါလီမန် - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
e-Residency - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အက်စ်တိုးနီးယားလုပ်ငန်း - website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Eesti.ee (ပြည်နယ်ပေါ်တယ်) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
link ကိုမှ အက်စ်တိုးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန အက်စတိုးနီးယားတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်